October 2017 – Bachan Tv
रामप्रसाद न्यौपानेको दोस्रो लडाइँ ख्रीष्टियन महासंघसँग
Posted on October 31, 2017 October 31, 2017 by BACHAN TV
इसाई समाज एकता केन्द्र नेपाल बारेमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले एक विज्ञप्ती निकालेको छ । प्रवक्ता सागर बैंजुको हस्ताक्षर गरिएको सो विज्ञप्तीमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको साथै तथ्यहीन, अबैधानिक र भ्रमपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । निज रामप्रसाद न्यौपानै राजनीतिक कार्यकर्ता रहेकोले ख्रीष्टियन समुदायलाई तोकेर भोट नमाग्न सचेतसमेत गराएको छ । ख्रीष्टियन समुदाय धार्मिक समुदाय भएकोले कुनै पनि पार्टी तथस्थ सिद्धान्त रहने जानकारी गराएको छ ।
महासंघको आधिकारीक फेसबुकमा गएर रामप्रसाद न्यौपाने अश्लील र अपशब्द प्रयोग गरि घोर आपत्ति जनाएको जानकारी गराएका छन् । धम्कीपूर्ण भाषामा उनले लेखेका छन्, “पहिलो लडाइँ जनयुद्धमा राजतन्त्रको विरुद्ध थियो भने अब दोस्रो लडाइँ महासंघका व्यक्तिहरुसँग रहेको प्रस्ट पारेको छन् ।”
नपत्याए हेर्नुहोस् उहाँको कमेन्ट
Posted in News1 Comment on रामप्रसाद न्यौपानेको दोस्रो लडाइँ ख्रीष्टियन महासंघसँग
३१ अक्टोबर १५१७ लाई सुधारवादको सुभारम्भको औपचारिक दिन मानिन्छ जुन दिन मार्टिन लुथरले विटेनबर्ग मण्डलीको भित्तामा ९५ ओटा बुँदा टाँसिदिएका थिए । आज सुधारवादले ५०० वर्षको टाकुरालाई चुमेको छ । क्याथोलिक मण्डलीबाट भएको विशाल फुट थियो, सुधारवाद । मार्टिन लुथर, जोन काल्भिन, अलरिच ज्विङ्ग्ली, जोन नक्ससाथै अन्य प्रारम्भिक सुधारवादीहरूले यसको थालनी गरेका थिए । सोर्हौँ शताब्दीमा युरोपमा थालनी भएको यो मण्डली सुधारको ज्वाला द्रुतगतिमा विश्वभरि फैलँदै नेपालसम्म आइपुग्यो जहाँ यो बेसरी दन्किरहेको छ ।
सुधारवादको मुटुमा चारवटा प्रश्न पर्छन्: (१) एउटा व्यक्तिले कसरी उद्धार पाउँछ? (२) धार्मिक अख्तियार कहाँ खडा छ? (३) मण्डली भनेको के हो? (४) ख्रीष्टियान जीवन-यापनको सार के हो? यिनै प्रश्नहरूको जवाफको लागि सुधारवादीहरूले केही अवधारणाहरूको विकास गरे जसलाई “पाँचवटा केवल” को रूपमा चिनिन्छ । यी पाँचवटा बाइबलीय सिद्धान्तले सुधारवादलाई क्याथोलिकवादबाट प्रस्ट रूपमा अलग गराउँछन् ।
(१) केवल धर्मशास्त्रः विश्वास र अभ्यासका सबै गतिविधिका लागि बाइबल एक मात्र अख्तियारधारी पुस्तक हो । मण्डलीका सबै शिक्षा र परम्परालाई यसले नै मापन गर्नुपर्छ ।
(२) केवल अनुग्रहबाट उद्धारः उद्धार परमेश्वरको अनार्जित दया हो । कुनै पनि कामबाट नभई उहाँको अनुग्रहबाट मात्र हामीले परमेश्वरको क्रोधबाट छुटकारा पाएका छौँ ।
(३) केवल विश्वासद्वारा उद्धारः व्यवस्थाका कामहरूबाट नभई ख्रीष्टमाथि गरिएको विश्वासद्वारा मात्र हामीले उद्धार पाउँछौँ ।
(४) केवल ख्रीष्टमाः उद्धार ख्रीष्टमा मात्र पाइन्छ । अरू कसैले वा कुनै कुराले मानिसलाई बचाउन सक्दैन । हाम्रो धर्मीकरण र परमेश्वरसित हाम्रो मिलापको लागि क्रुसमा येशूको स्थानापन्न मृत्यु पर्याप्त छ ।
(५) केवल परमेश्वरको महिमाको लागिः उद्धार परमेश्वरको हो; उहाँले नै यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ; र यो केवल उहाँको महिमाको लागि हो । हामी उहाँको अख्तियारमुनि उहाँको महिमाको लागि जिउनुपर्छ ।
Posted on October 30, 2017 October 30, 2017 by BACHAN TV
Posted in Articles1 Comment on महासंघ र समाजको मुद्दाहरु एकै हुन
१२ कात्तिक २०७४, काठमाण्डौँ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाज्यूलाई ख्रीष्टियन समुदायका राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले उहाँकै निवास वालुवाटारमा भेट गरी ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ वीच भएको ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमती कार्यान्वयनको लागि एक उच्चस्तरिय समिति गठन गरिनुपर्ने र ख्रीष्टियन समुदायको मृत्युसंस्कार जस्ता संवेदनशिल विषयलाई ध्यानमा राखी समाधिस्थलको देशभर व्यवस्था गररिनु पर्ने र २०ं६४ सालदेखि दिदैँ आएको ख्रीष्टमस विदालाई सार्वजनिक विदाको रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने लगायतका राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा माग गरिएको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौँडेल, पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला, नेता विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेता अर्जुननरसिंह के.सी. लगायतका वरिष्ठ व्यक्तिहरुको रोहवरमा उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष सी.वी. गहतराजको नेतृत्वमा सह–अध्यक्ष रेभ. शामूएल सोदेम्वा रीता थापा मगर, पा. तेजमान तामाङ, उपाध्यक्ष रेभ. बाबुराम हिङ्गमाङ्ग, अन्ना पेडन महासचिव पा. पदमनाथ पराजुली, सचिव पा. तेज बहादुर रोक्का, पा. हेम बहादुर थापा, उपमहासचिव तथा प्रवक्ता पा. सागर बैँजु र प्रार्थना विभागका प्रमुख देउमाया तामाङ लगायतका प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरिएको हो । भेटमा हालै पारित गरिएको फौजदारी विधेयकको विषयमा स्पष्ट गरिदिनुहुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाज्यूले यो विधेयक सबै धार्मिक समुदायलाई यो विधेयकले वाधा व्यवधान नगरेको र ख्रीष्टियन समुदायलाई कुनै हल्लाको पछि नलागिकन ढुक्क भएर आफनो धार्मिक आस्था अनुसारको अभ्यास र प्रचार गर्न ख्रीष्टियन समुदायलाई भन्नुभयो । साथै सो भेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारसँग भएका सहमती यथासिघ्र छिटो कार्यान्वयन गरी समिति गठन गरिदिने, समाधिस्थलको देशभर व्यवस्था गरिदिने, ख्रीष्टमसको सार्वजनिक विदा घोषणा गरिदिने लगायतका राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालसँग भएका सहमतिहरु यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
दिल शोभा वडा दिल
आमाको घर ; को आमाः दिल शोभा वडा दिल
श्रेष्ठ बृद्घ आमा र अनाथ बालबालीकाको सेवामा समर्पित ः–
दिल शोभा श्रेष्ठ, आमा घरको आमा भनेर चिनिन्छ । मिती वि.स. २०१० मा जन्मनुभएको हाल वहाँको आफ्नै निजी भवनमा आमाहरूको माझमा सेवारित हुनुहुन्छ । शुरूको दिनमा विभिन्न परमेश्वरको नाउँमा भौतारिएर हिँडिरहने कहिले आङ्गसाङ्गहोङ्ग यहोवाको साक्षी र क्याथोलिक चर्च भएको थियो । पवित्र शास्त्र बाइबलमा आङ्गसाङ्ग कतै पाउनु भएन त्यस्तै, क्याथोलिक चर्चमा माताको पूजा गर्ने कुराहरू पाउनुभयो तर बाइबलमा यस्तो कतै पनि भेट्नु भएन । त्रिएक परमेश्वर शालोम एजी चर्चका एउटा आमा उर्मिला शाक्यले पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई पुर्काने मण्डली भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि त्यही मण्डली सेवा गर्न थाल्नुभयो । साँचो परमेश्वरको साँचो ज्ञान भयो । प्रभुले उहाँको जिवनमा परिवर्तन ल्याउनुभयो । “म घमण्डी थिए ।”, वचन पत्रिकासँग खुलेर भन्नुभयो । जीवनका तिताकुराहरू सबै प्रभुले हटाउनु भयो ।
प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो । श्रीमानले छोरी पाएको भनेर उहाँलाई छोडेर जानुभयो । र उहाँ निकै दुःख भोग्नुभयो । त्यसपश्चात उहाँले आफ्नो छोरी कन्ययादान गर्ने बेलामा पनि श्रीमान नहुँदा असाध्यै दुःख भोग्नुभयो र अन्त्यमा एक्लै हुनुभयो र रोइ–रोइ बस्नुभयो । एकजना त्रिपुरेश्वरमा बस्ने साथी प्रतिमा सुवेदीले भेटेर वहाँको त्यो दुःखको अवस्थामा सान्त्वना दिनुभयो । त्यसपछि उहाँको जिवनमा एक नयाँ मोड आयो । सुवेदीले एक जना आमाको घरमा ल्याउनु भयो । आमाको तीन–चार जना छोराहरू थिए तर त्यो आमाको अवस्था एकदमै दयनिय थियो । यद्यपी आमा धनी पनि हुनुहुन्थ्यो तर छोराहरु भए पनि श्रीमान् छाड्नु थियो । यो घटनाबाट उहाँले पाठ सिक्नु भयो ।
कालिमाटीको एक आमाको अवस्था देख्नु भयो । उहाँ दुई वर्षसम्म त्यस आमाको सेवामा लाग्नु भयो । उहाँले तरकारी, दुध, लिएर जानुहुन्थ्यो, खाना पकाउनुहुन्थ्यो खुवाउनु हुन्थ्यो । त्यस आमालाई सर–सफाई देखी लिएर लुगा धुने र सबै काम गरिदिनुहुन्थ्यो । त्यस आमाको दिसापिसाव त्यही बस्ने कोठामा गर्नुहुन्थ्यो । त्यो सधै सफा गर्नु पर्दथ्यो । छोराछोरी भएपनि त्यो आमालाई वस्ता गरिदिन्थ्यो । एक जना काम गर्ने केटाले पनि परैबाट खाना फाल्थियो । त्यो आमा धनी थिइन तर त्यो धन काम लागेन । एक दिन त्यो आमाको छोरालाई धनको लोभले मैले सेवा गरेका होइन भनेर पनि भन्नुभयो । विस्तारै त्यो आमाको अवस्था सुर्धियो । यो नै पहिलो आमाको सेवा थियो ।
उहाँको विचार अनुसार मरेपछी श्राद्घ होइन जिउँदै श्रद्घा गर्न सिकौं । हामी आश्रम बनाउने तर्फ होइन तर आश्रय दिने व्यक्ति बनौं । हामी गुनासो गर्ने होइन तर जिज्ञासा गर्न सिकौं र गरौं ।
वहाँ भन्नुहुन्छ साहाराविहिन मानिरहरूको साहाराको रूपमा हुनुहुन्छ । वहाँले सडक छेउहरूमा खान नपाएका बुढी आमाहरूलाई केही नराम्रो मानी सेवा गर्नुभयो ।
उहाँको आमा घर निवासमा कुनै पनि जातभात, धर्मको भेदभाव नगरी सेवा गर्नुहुन्छ । सेवालाई परमेश्वरबाटको वरदानको रूपमा लिनुहुन्छ । “आमाहरू सडकमा आउनुको कारण घरमा उचित माया, न्यानो र सद्भाव नपाएकाले गर्दा सडकमा आएका हुन् ।” भनेर आमाहरूले भन्नुहुन्छ । “आमाहरुको छोराछोरीहरु बेरोजगारका कारण उहाँको आमाहरू धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् ।” उहाको ठम्याइछ । कति आमाहरु विभिन्न कारणहरुले सडकमा आउनु हुन्छ । तर त्यो सडकमा कुनै पनि सुरक्षा नै छैन । कति आमा त्यही सडकमा लुटिन्छन् । कति नराम्रो मानिसहरु पनि छन् सड्कमा । त्यस्ता वुढी आमाहरुलाई कतिले जर्वजस्ती बलात्कार पनि गर्दछन् । कति डर लाग्दो अवस्था छ ।
जिवनका मोडहरूमा उहाँलाई यौन दुराचारको आरोप लाग्यो । ति यौन दुराचार लगाउनेहरुलाई उहाँले हृदयबाट नै क्षमा दिनुभयो । वकीलहरू आएर उहाँलाई दोष आरोप लगाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तिनीहरुलाई त्यसै छोड्नु हुँदैन । हामीहरु तपाईंको साथमा छौं भनेर सान्त्वना उहाँले पाउनु भयो । सबै पक्षहरुको साथ हुँदा हुँदै पनि उहाँले प्रभुले सिकाउनु भएको पथमा चल्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ यस घटनाले मलाई अझ बलियो बनाएको छ । प्रभुसँग नजिक हुने मौका पनि पाएँ । कमजोर ठाउँहरुलाई सुर्धान मौका पाएँ । इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनी यो समय प्रार्थना गरिदिनु हुनेलाई धन्यवाद वचन पत्रिकामार्फत दिदछु ।” उहाँले थप्नुभयो, “ यदि म गलत भए प्रमाणित गर्न सके त ?”
जाकब तामाङ्ग आमा घरको पक्षमा भन्नुहुन्छ, “दिल शोभा आमा निर्दोष हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न मानिसहरूले यौन दुराचारको आरोप लगाएको थियो तर पनि हामीले आमालाई सान्त्वना दियौं । लूका २३ः३४ पदमा प्रभु येशूले दर्दनाक पिडा सहनुभयो र भन्नुभयो पिता क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन् । यही गुण दिलशोभा आमामा सरेको हो भन्ने हामीले बुझ्यौं । पछिल्लो अध्ययनले पनि यो कुरा पत्ता लगायो । सिएनएन हिराको ऋबलमष्मबतभ हुनुहुन्थ्यो । तेस्रो पटकसम्म सिएनएन हिरो भएको राष्ट्रमा भोका, नाङ्गा सडकमा हुनुहुँदैन । सुनोजित यो घटना थियो । तर विभिन्न पक्षहरू खाडल खन्ने काम ग¥यो तर पनि बाइबलले बताउछ । जसले खाडल खन्छ, उ आफै त्यो खाडलमा गर्दछ । अन्तः उहाँ दिल शोभा आमाको जित भएकोछ । वहाँबाट सिंगो नेपाली इसाई जगत र नेपाली दाजुभई दिदीबहिनीहरूले सिक्नु पर्दछ ।
अमेरिका पत्ता लगाउने क्रिस्टोफर कोलम्बसलाई बाइबलले नै सामुन्द्रिक यात्रा गर्ने प्रेरणा मिलेको थियो
Posted on October 30, 2017 by BACHAN TV
क्रिस्टोफर कोलम्बस इटालीका सामुद्रिक अन्वेषक थिए । तिनले चार पटक एटलान्टिक महासागर वारपार गरे । ख्रिस्टाब्द १४९२ मा तिनले पहिलो सामुद्रिक यात्रा थाल्दा जापान पुग्ने तिनको अपेक्षाको विपरीत तिनी नयाँ संसार पुगेका थिए । नयाँ संसार भन्नाले पश्चिमी गोलार्द्धलाई बुझ्नुपर्छ जहाँ उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको दुवै भुगोल पर्दछन् । तसर्थ, अमेरिकाको दुवै महादेश पत्ता लगाउने श्रेय कोलम्बसलाई नै जान्छ ।
इतिहासमा परमेश्वरले गर्नुभएका अद्भूत हस्तक्षेपहरूमध्ये कोलम्बसको सामुद्रिक यात्रा एक हो । अन्यजातिहरू परमेश्वरमा आउने थिए भन्ने यशैयाका भविष्यवाणीहरू (जस्तै: ६०:३) बारे तिनी सचेत थिए । तिनले आफ्ना यात्राहरूलाई यी भविष्यवाणीहरूको समाप्तिको रूपमा हेरेका थिए ।
आफूले यात्रा सकेको एक दसकपछि तिनले लेखे, “इन्डिजमा सामुद्रिक यात्रा गर्ने विचार परमप्रभुले नै मेरो मनमा हालिदिनुभयो । मेरो परियोजनाको बारेमा सुन्ने सबैले नै मेरो उपहास गर्दै यसलाई हाँसोमा उडाइदिए । प्रेरणा पवित्र आत्माबाट नै आएको थियो भन्ने कुरोमा कुनै प्रश्न थिएन किनकि पवित्र धर्मशास्त्रका अद्भूत ज्योतिका किरणसहित उहाँले मलाई सान्त्वना दिनुभएको थियो । … इन्डिजमा यात्रा गर्दा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रस्ट आश्चर्यकर्म गर्न चाहनुभएको थियो ।”
क्रिस्चियानिटी टुडेअनुसार कोलम्बस ३० अक्टोबर १४५१ मा जन्मेका थिए ।
इसाई युवाहरुको खुल्ला बहस यही शनिवार
Posted on October 29, 2017 October 29, 2017 by BACHAN TV
१२, कार्तिक २०७४
६ दशक भन्दा बढी इतिहास बोकेको इसाई समुदाय यहाँसम्म आइपुग्दा परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई चलाइ रहनुभएको छ । व्यक्तिहरु र संस्थाहरुले परमेश्वरको राज्य फैलाउन महत्वपूर्ण भुमिका र योगदान गरिरहेका छन् ।
इसाई समुदायको प्रतिनिधि गर्ने विभिन्न संघ, संस्थाहरु प्रशस्तमा खुलेर कार्य गरिरहेका छन् । समयको हिसाब गर्ने हो भने एनसिएफ नेपाल, नेपाल ख्रीष्टियान समाज, पोखेरिल ख्रीष्टिय समाज, ख्रीष्टियन महासंघ लगायत अरु थुप्रै सम्प्रदायका विभिन्न नाउ गरेका संस्था छन् । ति विभिन्न संस्थाहरु इसाई समुदायलाई सकेको योगदान भइरहेका छन् ।
तर इसाई युवाहरुलाई समट्ने कुनै पनि आधिकारीक र प्रतिनिधिमूलक संस्था रहेको छैन् । नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय दर्ता भएको संस्था हालसम्म आउँदा भेट्न सकिएको छैन । पछिल्लो समयमा विकाशदत्त दुलालको अगुवामा शुरु भएको फोरम हालसम्म आउदा बिभिन्न कारणले सक्रिय हुन सकेन । विभिन्न सम्प्रदायको युवा विभाग, संस्था प्रशस्त गरेका छन् । यसबाट परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा ख्रीष्टियन युवाहरुको मान्यता प्राप्त, आधिकारीक र प्रतिनिधिमूलक संस्थाको बारेमा बहस चुलिएको छ । स्वस्फुर्त केही महिनादेखि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत युवाहरु बैठकहरुमा सहभागिता र छलफल भएको जानकारी युवा तुलसी श्रेष्ठले वचन पत्रिकालाई बताउनु भयो ।
पछिल्लो समयका निर्णायक भुमिकमा आउनु पर्दछ भनेर खुल्ला छलफलको निम्ति आवहान गरिएको छ । कुनै पनि सम्प्रदायका युवाहरु हुन गइरहेको कार्यक्रममा सहभागिता हुन सक्दछन् । सो कार्यक्रम बेथशालोम पुतली सडक चर्चमा आउदो शनिवार अर्थात् कार्तिक १८ गते दिउँसो २ः३० बजे हुने जानकारी वचन पत्रिकालाई प्राप्त भएको छ । आशा गरौं यस कार्यक्रमबाट इसाई युवाहरुको निम्ति केही नयाँ कार्य हुनेछ ।
Posted in News1 Comment on इसाई युवाहरुको खुल्ला बहस यही शनिवार
असोज १२ गते रिर्पोट क्लवमा एक पत्रकार सम्मेलन गरि आमुल परिवर्तन मसिहा पार्टीले दुःख व्यक्त गरेको छ । फौजदारी कानुनको चर्को विरुद्ध गरेको थियो । सो कानूनले जातियता र धार्मिक द्धन्द्ध ल्याउने सो पार्टीको निष्कर्ष रहेका जानकारी अध्यक्ष भरत गिरीले बताउनु भयो । १० बुँदे माग र विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका खबर प्राप्त भएको छ ।
सो पार्टी ख्रीष्टियन समुदायमा विवाद मुछिएको पार्टी हो । ख्रीष्टियन पार्टी नाउ राखेर गिरी एकाएक चर्चामा आएका थिए । चुनाव चिन्ह त्रूmससमेत राखेको सो पार्टी पछि निर्वाचन आयोग नदिएपछि ख्रीष्टियन समुदाय शान्त भएको थियो । सो पार्टी माइती मण्डलामा आन्दोलनसमेत गरेको थियो ।